UNICEF oo walaac ka muujisay xaalada bani aadanimo oo heysata ... | Universal Somali TV
UNICEF oo walaac ka muujisay xaalada bani aadanimo oo heysata Caruurta Yemen
Hey,ada qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee (UNICEF) ayaa sheegtay in colaada ka socota yemen ay tahay mid nolol adag galisay caruurta ku nool dalka carbeed.
Meritxell Relano oo u hadlay Unicef maanta oo khmaiis ah ayaa waxaa uu sheegay in ka badan 11 million oo caruur ah oo ku nool yemen ay wajahayaan cuno yari cuduro iyo in aysan heysan waxyaabaha kale ee aasaasiga u ah Nolosha.
Waxaa uu tilmaamay in colaada yemen ay keentay in nolol kulul ay wajahaan caruur tiradooda lagu qiyaasay 1.8 million ay la heysato nafaqo daro,halka 400,000 oo ka mid ah ay la tacalayaan noloshooda maalin walba sidii ay ku samatabixin lahaayeen.
Sida laga soo xigtay mr Relano, UNICEF ayaa gargaar u badan Nafaqo waxay siisay 244,000 oo caruur ah sanadan 2018-ka waxaana wali jira 317,000 ilmo ah oo da,dooda ka yartahay shan sano kuwaasi oo wali u baahan gargaar bani aadanimo.
Lise Grande oo ah madaxa gargaar ee qaramada midoobay ayaa iyana war saxafadeed ay soo saartay khamiistan waxa ku sheegtay maciishada yemen oo sareysa iyo goobaha dagaalka ka socda oo aan la gaari karin ay keentay in ay xaaladu Noqoto mid aan la isku haleyn karin.
Kan-xigaLaba nin oo lagu eedeyay dilka jaajuu...
Kan-horeHindiya oo mamnuucday boqolaal shirka...
46,652,146 unique visits